Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha East London ee JOKA oo qodobo dhaxagal ah kasoo saaray shirkoodii
Xubnaha East London ee JOKA oo qodobo dhaxagal ah kasoo saaray shirkoodii
Posted by ONA Admin	/ April 9, 2014
Waxaa maanta oo ay taariikhdu ahayd 07-04-2014 isugu yimid xaafad kamid ah xaafadaha East London xubnaha faraca East London, waxaana kobtas ka furmay isla markiiba shirki bilaha ahaa ee xubnaha kadib abaabul balaadhan oo uu faracu sameyay lana yeeshay dallada culimaa udiinka Somaaliyeed eeSouth Africaqeybtiisa East London.
Waxaa u suurta gashay faraca inuu helo taageerada culimada iyadoo ay howshaas balaadhan socotay ilaa dhamaadkii shirweynihii jaaliyada JOKA ka dib markuu mamulka farucu uu gaadhay go’aan ah iney kor uqaadaan tayada xubnaha iyo baraarujintoodaba. Waxaa kalo jiray dadaalo iyo abaabulo balaadhan oo gabi ahanba ka socday agagaarka East London iyo gudaha magaaladaba.
Shirka maanta oo aan la odhan karo wuxuu ahaa shir abaabul oy kasoo qeyb galeeen intii badneyd xubnaha faraca iyo xubno kale o ka socday faraca Eastern Cape ee P.E. ayaa ugu horeynba shirka waxaa ku furay khudbad diini ah Sheekh Nadiiir oo runtii aad ugu bararujiyay xubnaha halganka ka socda Ogadenia ee xaqa ah. Waxaa kaloo warbixintii shirweynaha jaaliyada Ogadenia ee Koonfur Africa JOKA iyo khudbad balaadhan kaso jediyay hogaanka arimaha bulshada ee faraca mudane Khadar Maxamed Aadan (CAGAF).
Waxaa shirk-gudoon ka aha sheekh Shaafi Cabdi Biixi oo kamid aha gudidii fulinta ee hore ee jaaliyada, iyo shekha faraca sheekh Abubakar oo isna ka hadlay dardar galinta iyo kor u qaadida iyo ka run sheegista balanqaadkii ahaa xubinimada jaaliyada oo ay ugu muhimsan tahay ilaalinta sirta ururka iyo utaagnaanta shaqada jaaliyada oo ah labada arimood oo muhiim ah isagoo sheegay in dhaqalaha kor loo qaado iyo abaabulida bulsha weynta uu faracu ka dhex shaqeeyo.
Inkastoo ay fursad wada heli kari wayeen ay kuwada hadlaan dhamaanba kasoo qeyb galayasha shirkan ayaa hadana aanay ka madhneyn meesha kaalintii ay dumarka farucu ku lahayen shirkan iyo qabashadiisaba, waxaana xubnaha lagula dardaarmay iyo dhamaanba maamulka faraca ee meesha isugu yimid iney laban laabaan dadaalkoda wax qabadeed iyo guud ahaanba kor u qaadida qadiyada umada OGADENIA ee muqadaska ah.
Waxaa shirkii maanta kasoo baxay oo uu maamulka farucu kasoo saaray goaano dhowr ah waxana kamid ahaa;
– in lasii xoojiyo shirkan bilaha ah ee xubnaha loona sameyo shir todobaadkiba mar maamulaka faraca.
– in la kordhiyo xidhiidhka bulshada Ogadeniaa ee ku dhaqan East London iyo nawaaxigeeda
– in laksbado saaxiibo halgankana kor loogu qaado gar ahaan walaalaha Soomaaliyeed ee nala dagan East London.
– in qadiyada lagaadhsiiyo dhamaanba dadyowga kale ee ku sugan magaalada East London si gaar ahna dadka South Africa-ka ah iyo xafiisyada maamulka dowlada.
– in xubnaha la jogteeyo kontoroolida anshaxooda iyo asluubta iyo guud ahaanba dhaqanka hagaagsan oo lagu tilmaamo,
– in odayaashu la shiraan odayaasha kale say umuujiyaan is dhexgal sidaas si lamid ahna dhalinyaradu dhalinyarada la shirto kana dhaadhiciso halganka iyo dhibaatada gud ahaanba lagu hayo umada Ogadenia.
– in 3dii bilodba mar lagu qabto magaalada shir looguna baaqo dhamaanba dadka Soomaaliyed iney kaso qeyb galaan loona sheego warbixinda udanbeeya iyo horumarka halganka si lo kasbado ilo dhaqale oo wax ku ool ah.
– in xubnuhu kasoo qeyb galaan casharo diini ah oo laga bilaabi doono todobaadada soo socda xafiiska faraca, oo si sharci ah loo furay inkasto qalabayntisu ay dhiman tahay.
Waxaa shirka uu kusoo dhamaday jawi aad uqurx badan iyo xubnaha oo aad u baraarugsan, waxaana la isla meel dhigay iney xubnuhu sidiii lagu yaqaanay xubinka JWXO ay layimaadaan amar qaadasho, kala danbeyn iyo is jecleysi xubnaha dhexdooda ah.
Waxaa dhamaadkii shirka lagu soo gababeeyay duco uu ugu duceynayo dhibanayasha Ogadenia sheekh shaafi cabdi biixi.